December 2017 - MoviesFan
၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင် ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးများ
ယမန့်နေ့က TC Candler and The Independent Critics က ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အလှဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင် ၁၀၀ စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ list ကို အမျိုးသမီးတွေအတွက် “အလှပဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင် ၁၀၀” နဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် “အခန့်ညားဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင် ၁၀၀” ဆိုပြီး list ၂ ခုခွဲပြီးထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ list တွေထဲမှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နဲ့မော်ဒယ်တွေကစလို့ အားကစားသမားတွေအထိ နယ်ပယ်စုံက နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဝင်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ကမ္ဘာ့အလှပဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေရယ်လို့ သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အချို့ကို သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့အဆင့်ရယ် သူတို့ရဲ့ထင်ရှားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့တကွ ကောက်နှုက်ဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ List အပြည့်အစုံကိုသိရှိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ TC Candler ရဲ့ဗီဒီယိုမှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ရဲ့ အလှပဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင် ၁၀၀
14. Emma Watson (Hermione Granger @ Harry Potter series)
22. Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman @ Wonder Woman, Justice League) Read More
Star Wars: The Last Jedi ကို အာကာသထဲမှာကြည့်ခဲ့ကြသူများ
သင် Star Wars: The Last Jedi ကို ဘယ်မှာသွားကြည့်ခဲ့ပါသလဲ။ Star Wars ချစ်သူတွေကတော့ ရုပ်ရှင်ကို အပြည့်အဝခံစားဖို့ အသံစနစ်အကောင်းစားနဲ့ 3D ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာသွားကြည့်ကြမှာပါ။ ပိုက်ဆံခြွေတာချင်သူတွေ၊ ရုံမှာသွားကြည့်ဖို့အဆင်မပြေသူတွေကလည်း အိမ်မှာ cam မှုန်မှုန်ဝါးဝါးလေးကိုကြည့်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင် IMAX ရုံမှာပဲကြည့်ကြည့်၊ Dolby Atmos ရုံမှာပဲကြည့်ကြည့် International Space Station (ISS) ပေါ်က ယာဉ်မှူးတွေရဲ့ Star Wars movie session လေးကိုမှီမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အာကာသယာဉ်မှူး Mark T. Vande Hei က သူအပါအဝင် ISS ပေါ်ကလူတွေရဲ့ ခရစ်စမတ်ညလေးအကြောင်းကို သူ့ရဲ့ twitter စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ “ကြိုးကုလားထိုင်၊ သောက်စရာ၊ Sci-Fi ရုပ်ရှင်ကားတွေပါဝင်တဲ့ Space Station ပေါ်က movie night” လို့ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ အဆိုပါ tweet ဟာ Star Wars ချစ်သူတွေအတွက်ကတော့ မနာလိုသွားရေကျချင်စရာပဲ။ Epic Space Opera ကို Space ထဲမှာကြည့်ခွင့်ရတာကတော့ တကယ်ကိုလန်းလွန်းပါတယ်။ ကဲ.. Star Wars ချစ်သူတွေ အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပြီး ငါသာအဲဒီလိုကြည့်လိုက်ရရင်တော့ကွာ ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား။
Hailee Steinfeld နဲ့ Bumblebee တို့ကိုယှဉ်တွဲဖော်ပြထားတဲ့ ‘Bumblebee: The Movie’ ရဲ့ပထမဆုံးပုံ
ခေတ်သစ် Transformers series ရဲ့ ပထမဦးဆုံး spin-off ဖြစ်တဲ့ ‘Bumblebee: The Movie’ ရဲ့ ပထမဦးဆုံးပုံထွက်ရှိလာပါပြီ။ ဒီပုံထဲမှာ အဓိကလူဇာတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ Charlie Watson နဲ့ Bumblebee တို့ကို ယှဉ်တွဲပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာဇာတ်အိမ်တည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Bumblebee ကို အဲဒီခေတ်က Bumblebee ရဲ့အသွင်ဖြစ်တဲ့ Volkswagen Beetle ပုံစံနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ။
‘Bumblebee: The Movie’ ကို ‘Kubo And The Two Strings’ ရုပ်ရှင်ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Travis Knight ကရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ် Transformers ဇာတ်လမ်းတွေထဲက Michael Bay မရိုက်ကူးတဲ့ ပထမဦးဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Charlie Watson ဇာတ်ရုပ်ကို True Grit (၂၀၁၀)၊ Ender’s Game (2013)၊ Pitch Perfect2(၂၀၁၅) နဲ့ Pitch Perfect3(၂၀၁၇) စတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော Hailee Steinfeld ကသရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ သူမဟာ အမှိုက်ပုံထဲမှာပုန်းနေတဲ့ Bumblebee ကိုရှာတွေ့ခဲ့သူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်ကဖက်ရှင်နဲ့လန်းနေတဲ့ Hailee Steinfeld နဲ့ Bumblebee တို့ကို Empire မဂ္ဂဇင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အောက်ပါပုံမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Transformers series ကိုနှစ်သက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Transformers ဇာတ်ကားတွေက အသစ်ပါလာတဲ့ Bot အချို့ကလွဲပြီး ဖန်တစ်ရာတေနေတဲ့ဇာတ်ကွက်တွေကြောင့် ကျွန်တော့်ကိုမချင့်မရဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Michael Bay ရဲ့ explosion magic တွေက ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ အရင်ကလောက်သက်ရောက်မှုမရှိတော့တာကြောင့်လည်းပါမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် အသွင်သစ်၊ ဒါရိုက်တာအသစ်၊ ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ပုံအသစ်နဲ့ ဒီ Bumblebee ဇာတ်ကားကိုတော့ အရင်ဇာတ်ကားတွေထက်အများကြီးပိုမျှော်လင့်မိပါတယ်။ ‘Bumblebee: The Movie’ ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Action & Adventure, Hollywood, Science Fiction
INSIDIOUS ချစ်သူတွေအတွက် မကြာခင်ရုံတင်တော့မယ် INSIDIOUS : The Last Key
၂၀၁၈ မှာ ရုံတင်ပြသမယ့် INSIDIOUS : The Last Key မှာတော့ ဘယ်လိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေ ပါဝင်ဦးမလဲ ဆိုတာကို စောင့်မျှော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့က INSIDIOUS တွေမှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူကို မကောင်းဝါးတွေကကပ်လိုက် သားဖြစ်သူရဲ့ ဝိဉာဉ်ကိုဖမ်းခေါ်ထားလိုက်နဲ့ အရမ်းကြောက်စရာကောင်းပြီး လူတိုင်းရင်တုန်ကြောက်လန့်ခဲ့ရတာ INSIDIOUS ရဲ့ Chapter တွေပါ။ INSIDIOUS တင်တိုင်း ကြောက်စရာကောင်းမှန်းသိသိကြီးနဲ့ အားပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေကို အခုလည်း ဘယ်လိုဘယ်ပုံနဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ တာဆီးခြောက်လှန့်မှုတွေကို ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုရိုက်ကူးပြသထားလည်းဆိုတာကို ခံစားကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ပထမအပတ်လောက်မှာ release လုပ်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ Horror ဆိုတာ လူအများကြီးစုကြည့်ပြီး အော်ရဟစ်ရတာ ကြောက်စရာပိုကောင်းတာမို့ အခုကတည်းက ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်းကို INSIDIOUS အတူကြည့်ဖို့ လူစုထားကြနော်။
Hollywood, Horror, supernatural
Nicolas Cage ကြီး သူ့သားသမီးတွေကိုလိုက်သတ်တာ ကြည့်ရမယ့် ‘Mom and Dad’ – Trailer ထွက်ပြီ
မိဘဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတွေကို အသက်နဲ့ထပ်တူချစ်ကြတယ်ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ သဘောအနေနဲ့ အဲဒါကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီး တွေးကြည့်လိုက်ပါလား၊ ကိုယ့်ကိုကျွေးမွေးပြုစုလာတဲ့ အဖေနဲ့အမေက ကိုယ့်ကိုအသေရရအရှင်ရရလိုက်သတ်တယ်ဆိုပြီးတော့။ အဲဒီလို ဗြောင်းဆန်နေတဲ့ plot ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ Mom and Dad လို့အမည်ရပါတယ်။ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလတုန်းက Toronto International Film Festival မှာ Premier လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ပထမဦးဆုံး Trailer ထွက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးငယ်တွေက ဇစ်မြစ်မသိရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် စိတ်ရိုင်းဝင်ပြီး ကိုယ့်ရင်သွေးတွေကိုလိုက်သတ်ကြတဲ့မိဘတွေရဲ့လက်ထဲက လွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးကြရမှာပါ။ မင်းသားကြီး Nicolas Cage နဲ့ မင်းသမီး Selma Blair တို့ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ဒီ Horror ဇာတ်ကားဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ Metacritic ရမှတ် ၇၁ မှတ်ရရှိထားတာမို့ မဆိုးလှဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေတဲ့ Horror ဇာတ်ကားမျိုးနှစ်သက်တတ်သူတွေကတော့ ဒီဇာတ်ကားရုံတင်မယ့် ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ကို လက်ချိုးရေတွက်နေကြဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။
Jackie Chan ရဲ့ Action တွေကို အရင်ကလိုမြင်တွေ့ရအုံးမယ့် BLEEDING STEEL
အားလုံးရဲ့အချစ်တော် Action မင်းသားကြီး Jackie Chan ကတော့ အသက်ရွယ်ကြီးရင့်လာပေမယ့်လည်း ငယ်ငယ်ကလို fighting တွေကို သွက်လက်ဖျက်လက်စွာလုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အနုပညာနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပေးဆပ်ဖို့ရန် အမြဲကြိုးစားနေဆဲဖြစ်သူမို့ ဒီနေ့ဒီချိန်ထိရပ်တည်နေနိုင်တာဆိုလည်း မမှားဘူးပေါ့။ ခုတခါတော့ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားဖို့အတွက် ဒီ ၂၀၁၇ မှာဘဲရုံတင်ထားတဲ့ The Foreigner လို fighting ကားမျိုးမှာ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးကို အပိုလူမလိုဘဲ တစ်ယောက်တည်း ထိန်းသွားနိုင်သလို အခု BLEEDING STEEL ဇာတ်ကားမှာရော ဘယ်လို fighting တွေ ပြသသွားမယ်ဆိုတာကို မကြာခင်ခံစားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ Jackie Chan ဟာလူဆိုးဂိုဏ်းနှိမ်နင်းတဲ့ အဖွဲ့ဝင်ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ Jackie Chan ရဲ့ အကောင်းဆုံး fighting တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်သွားမှာကို မြင်တွေ့ရမှာ သေချာနေပါပြီနော်။
action, chinese, fighting
၂၀၁၇ တစ်နှစ်တာရဲ့ Box Office မှာ ပထမနေရာရယူသွားပြန်တဲ့ Disney
Disney ကတော့ ၂၀၁၇ Box Office ရဲ့ ပထမနေရာကိုရယူသွားခဲ့ပါတယ်။ Disney ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တစ်နှစ်တာအတွက် စျေးကွက်ဝေစု ၂၁.၂ % ရရှိခဲ့ပြီး ဝင်ငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂.၂၄ ဘီလီယျံနဲ့ ပထမနေရာကိုရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပမာဏဟာ ယမန်နှစ်ကရရှိခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယျံကိုမမှီသေးပေမယ့် ၂၀၁၇ ရဲ့နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာ Star Wars: The Last Jedi ကရှာပေးဦးမယ့်ပမာဏမပါဝင်သေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ နှစ်ကုန်လို့စာရင်းချုပ်ရင် ယခုဖော်ပြထားတဲ့ပမာဏထက်ပိုများနိုင်ပါတယ်။
Warner Bros က စျေးကွက်ဝေစု ၁၉.၁ % နဲ့ ဒုတိယနေရာမှာလိုက်နေပြီး ဝင်ငွေစုစုပေါင်း ၂.၀၂ ဘီလီယျံရရှိထားပါတယ်။ တတိယနေရာကိုတော့ ၁၅.၁ % ၊ ဒေါ်လာ ၁.၆ ဘီလီယျံတို့နဲ့ Universal ကရရှိထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုက အဲဒီလောက်ဝင်ငွေရဖို့ Warner Bros က ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း ၃၃ ကား၊ Universal က ၂၆ ကား အသီးသီးထုတ်လုပ်ခဲ့ရချိန်မှာ Disney က စုစုပေါင်းရုပ်ရှင် ၁၂ ကားတည်းနဲ့ ပထမနေရာကိုယူသွားတာပါ။ Disney ကို ဝင်ငွေအများဆုံးရှာပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့ Beauty and the Beast ($504 million), Guardians of the Galaxy Vol.2 ($389.8 million), Thor: Ragnarok ($309.7 million) နဲ့ ယခုလက်ရှိရုံတင်နေတဲ့ Star Wars: The Last Jedi ($423.3 million) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ref: Box Office Mojo